Lazain’ny rahavaviko fa ratsy tarehy be ilay olona miaraka amiko.
Vehivavy 19 taona aho, manana olon-tiana.
Manana kaonty Facebook anankiray tsy nampahafantariny ahy io olon-tiako io, saingy tratrako taty aoriana.
Fahotana ve ny manao sipa, na miaraka amin'olona mialohan'ny mariazy, raha fiarahana tsy misy firaisana ara-nofo fa mifanoroka fotsiny, ohatra ?
Tsy fahotana mihitsy ny miaraka amin’olona, na manao sipa, na manana olo,n-tiana, arakarak’izay iantsoana azy.
19 taona aho, miaraka amin’ny lehilahy 29 taona izay efa nisara-bady.
Tsy tian’ny fianakaviako mihitsy izy, nefa izaho tia azy. Ilay vadiny taloha koa mandrahona ahy foana. Inona no tokony ataoko ?
20 taona aho, nisy lehilahy niaraka tamiko nandritra ny 4 taona.
Izy no niaraka tamiko voalohany ary efa fantatry ny ray aman-dreniko ny fiarahanay. Miady foana anefa izahay dia misaraka ary farany dia tena nisaraka tanteraka.
Fivalanan’ny zazakely : Tsy voatery ho mikraoba!
Mafana ny andro, avy ny orana, miparitaka ny fako etsy sy eroa. Matetika rehefa amin’ny vaninandro tahaka izao no tena manjaka ny fivalanana eo amin’ny zazakely.
Misy faritra potseriny izay eo amin’ny felan-tanana, hono, dia fantany. Tsy misy fomba mihitsy azo amantarana ety ivelany na virjiny ny vehivavy iray na tsia. Ny “gynécologue” ihany no hany afaka mamantatra izany, amin’ny alalan’ny fizahana ny taovam-pananahan’ny vehivavy.
Fiaraha-misakafo : manatsara ny fomba fisakafon’ny ankizy, tsy mampatavy
Manana anjara toerana lehibe ny fiaraha-misakafo ao anatin’ny fiainan’ny ankizy. Mitondra tombony manokana amin’ny fankafizana ny sakafo izany. Misy akony amin’ny fifehezana ny lanja koa. Araho anie :
Lasa matahotra aho, nefa izaho tena tia azy ary izy koa fantatro fa tia ahy. Mba toroy hevitra aho.
Misy fomba fiteny hoe : izay tiana mitombo tarehy. Araka izany, raha tena tianao izy dia tsy ho hitanao akory ny haratsiny, na fara-faharatsiny, tsy tokony hanelingelina anao mihitsy izay tarehiny any, na iza hiteny, na iza hanaratsy. Raha toa ka mampitebiteby anao izany dia tokony hanontany tena ianao, raha tena tia azy marina na tsia. Sady izay safidinao ihany io, fa ianao no hiaraka aminy. Ny olona tsy maintsy hiteny foana, na hananatra, na haneso… fa ianao no tompon’ny fanapahan-kevitra.
Lehilahy aho ary manana sipa. Ny namako rehetra dia tara amin’io sipako io daholo. Inona no tokony ataoko fa izaho no kely indrindra amin’ny namako rehetra ?
Ny tokony ataonao voalohany dia ny matoky tena sy ny matoky ilay olon-tianao. Tsy satria akory kely ianao dia tsy ho tian’io vehivavy io, rehefa mahita ny namanao izy. Rehefa mifankatia tena mifankatia ianareo dia izay no zava-dehibe. Tsy ho azonao sakanana tsy hisy hitsiriritra ny olon-tianao. Tokony hahafaly anao aza izany, satria manana ny tsara ianao matoa tsiriritin’olona. Raha tena namana koa ny namanao dia tsy hangalatra ny efa eo am-pela-tananao mihitsy. Matoa ianao miahiahy dia na, saro-piaro diso tafahoatra, izany hoe : tsy matoky tena ; na tsy atokisanao ho tena tia anao ilay vehivavy ; na ireo namanao no tsy azonao antoka.
Nisy lehilahy izay tena tiako. Izahay anefa misaraka kely iray volana foana, dia mifamerina avy eo. Mba mety ho tena tia ahy koa ve izy ? Omeo vahaolana fa tena sahirana aho mandinika ny fiainam-pitiavako.
Ny tena tsara dinihina eto dia ny antony mahatonga anareo hisaraka sy hifamerina lava. Raha tsy fantatra mazava izay antony izay dia tsy ho marin-toerana mihitsy ny fiainam-pitiavanareo. Dinihonao irery aloha : iza foana ilay maniry ny hisaraka ? Raha ianao : misy toetrany na zavatra ataony tsy zakanao ve ? Tsy azonao leferina mihitsy ve izany ? Raha izy indray : misy tsy zakany ve ny ataonao, na ny toetranao ? Sa izy mihitsy no te hiala fa tsy mahatombina loatra ? Vonona hanova ny toetranao tsy tantiny ve ianao ?... Rehefa vita ny fandinihanao tena sy ny fandinihanao ny momba azy dia angataho izy hifampiresaka aminao mahakasika izany. Raha manaiky izy dia tena vonona ny hitady vahaolana ho anareo. Raha tsy manaiky izy dia tsy matotra ny fitiavany, tsy te hiditra lalina izy ka tsy maniry ny hanatsara ny fifandraisanareo koa.